YINTONI EFUNWA NGUMNTU WONKE KUTHWALO LWABO LOKUTHUTHA I-LAYOVER ENDE - UKUPHILA
Yintoni efunwa ngumntu wonke kuThwalo lwabo lokuThutha i-Layover ende
Akukho mntu uthanda i-layover. Kodwa kuninzi onokukwenza ukwenza ukuma kwakho kube mnandi kangangoko kunokwenzeka, ukuqala ngalo mzuzu uqala ukupakisha iibhegi zakho. Ukuba izicwangciso zakho zeholide ziye zatshayisa kwisikhululo seenqwelomoya okwethutyana, pakisha ezi zinto zibalulekileyo ukuze uhlale ukhululekile kwaye uqokelele.
Snag isihlalo kufutshane nendawo yokuphuma kwaye ukhuphe iiyure ezimbalwa ezizayo ngokutya okubonakalayo okanye okubonwayo.
TV kunye neMiboniso bhanyabhanya
I-layover ende lixesha elihle lokufumana i-TV kunye neemovie. Ngaphambi kokuba uphume endlwini, khuphela izihloko ezimbalwa kwifowuni yakho okanye esinye isixhobo (ukuba i-wifi inebala okanye hayi Simahla).
yintoni ukubaluleka kwe-444
Inombolo yam yesikhululo seenqwelomoya kufuneka ibe yimagazini, kodwa ukunqanda ukulinganisa amaxabiso kwisikhululo seenqwelomoya, zithenge ngaphambi kokuba uhambe ekhaya okanye, kungcono, zama Uluhlu . Yisicelo esikunika ukufikelela kwiimagazini ezininzi ngeedola ezili-10 / ngenyanga. Ungazikhuphelela kwisixhobo sakho kwi-wifi yakho yasekhaya kwaye ufikelele kuzo zonke ii-glossies ozithandayo kwindiza okanye kwisikhululo seenqwelomoya.
Incwadi enkulu (kwidijithali okanye ikopi yephepha) soze ikudanise.
(Ityala lemifanekiso: Imemobottle )
Ibhotile yaManzi engenanto
Awunakho ukuthatha iziselo ngokhuseleko, kodwa ungazisa ibhotile yamanzi engenanto kwaye ugcwalise kumthombo wokusela. Ukuba isithuba ngumba, zama into encinci efana ne- Imemobottle , ngentla, okanye esongwayo, esongwayo I-Steamboat ibhotile.
Iindawo zangasese kunye neTouch-Ups
Nokuba upakisha iimveliso zakho eziphambili kwisingxobo sakho esikhangelwe, cinga ukupakisha izixhobo zangasese zesathelayithi kwindawo yakho yokuzihlaziya ukuze uzihlaziye phakathi kweenqwelomoya ezizaliswe zizinto ezifana namalaphu okucoca ulusu, ibrashi yeenwele kunye nezinye iimveliso zeenwele, into yokuthambisa, into yokuthambisa, into yokuthambisa kunye neesampulu ezithile zobungakanani bokuhamba kwakho.
Sukujonga zonke iimpahla zakho. Shiya izinto ezimbalwa ekuqhubekeni ukuze ufumane intuthuzelo ephezulu.
Ithetha ntoni i-410
Into eshushu kunye neKinda Bulky
Mhlawumbi sele uphethe ijezi okanye i-hoodie kwinqwelomoya ukujongana nokutshintsha kobushushu, kwaye iya kuba luncedo kwisikhululo seenqwelomoya ngesizathu esinye. Ijezi enobunzima ngokwenene, nangona kunjalo, inokuqengqeleka iphindwe kabini njengomqamelo ukuba ufuna ukulala phantsi kwaye ubambe iwink.
Ngaphantsi kwezinto ezintsha
Isikipa esicocekileyo okanye isibini esongezelelweyo esinokuchazwa sinokukunceda uzive uhlaziyekile, ngakumbi ukuba uneenqwelomoya ezinde okanye ucinga ukuba ungachitha ubusuku okanye ulala kwisikhululo seenqwelomoya.
(Ityala lemifanekiso: USvitlana Sokolova )
Nantoni na oyifunayo Ukuphonononga ukungayi ndawo
Ngosuku olunye olubi lokuhamba, ukuhamba kwam ngesiqhelo eAtlanta-ukuya eChicago kwakulibazisekile kwaye kwagqitywa eSarasota, eFlorida, ngenxa yeeyure eziyi-8. Njengelemonade evela kwiilamuni, mna nomyeni wam sagqiba kwelokuba sibaleke kwisikhululo seenqwelomoya kwaye sahamba ngebhasi edolophini ukuyokuhlola edolophini okwethutyana. Ukuba u yazi unalo olo hlobo lwexesha phakathi kweenqwelomoya zakho, ungakulungela ukongeza isixeko esingacwangciswanga kuhambo lwakho kunye nezibuko zelanga, iisuti zokuhlamba, ikhamera, izihlangu zokuhamba, izikhokelo zokuhamba kunye nayo nayiphi na into onokuyifuna ukonwabela indawo yokumisa.
Sivavanye Iindlela ezine zokuSusa amaNqaku aNgcolisayo kwaye le yaPhumelele
Iibhafu zewayini ziNdlela yokuziKhathalela yamaXesha aphakathi besingazi ukuba silahlekile
Esi sibane seThagethi seedola ezingama-40 simnandi kakhulu kangangokuba ndathenga Kabini… kwaye ndiza kuyithenga kwakhona
Ngena kwiDayi yeNdalo (Ngapha koko, UngayiDaya njani iipillowcases ezivela kwii-Avocado Pits)
Intsingiselo yokomoya ye-1222
Ithetha ntoni i-777 kumanani eengelosi
zingaphi iingelosi ezinkulu ezikhoyo kwaye ngubani amagama abo?
11 11 11 intsingiselo yokomoya